OKlebe baphenya ngokuputshuka kolwazi oluyimfihlo olusencwadini kaJacques Pauw | News24
OKlebe baphenya ngokuputshuka kolwazi oluyimfihlo olusencwadini kaJacques Pauw
Monica Laganparsad noLizeka Tandwa
Johannesburg - OKlebe sebeqinisekisile ukuthi baphenya ngokuputshuka kolwazi oluyimfihlo olube selubonakala lushicilelwe encwadini kaJacques Pauw esematheni kulezi zinsuku esihloko sithi The President's Keepers.
"OKlebe baphenya ngokuthi ngabe lolu lwazi luputshuke kanjani njengoba lungoluvikelekile ngokweNational Strategic Intelligence Act," kusho uBrigadier Hangwani Mulaudzi etshela iNews24.
Ube eseqinisekisa nokuthi icala livulwe yiState Security Agency kanti oKlebe sebejutshwe ukuba baphenye umsuka walolu lwazi. "Alikho icala elivulelwe uJacques Pauw," kusho uMulaudzi.
Khonamanjalo, okhulumela iState Security uBrian Dube utshele i-eNCA ukuthi leli cala livulelwe uPauw.
Unkosikazi kaPauw, uSam Pauw, utshele iNews24 ukuthi umyeni wakhe uyazi ngaleli cala kanti kumanje uxhumana nabameli ukuze bathola ukuthi kumele bathathe ziphi izinyathelo.
Incwadi kaPauw isithole okukhulu ukugxekwa yilabo abadlelana noMengameli Jacob Zuma njengoba iveza izinsolo zokuthi uMengameli wayekhokhelwa ngusomabhizinisi uRoy Moodley u-R1m njalo ngenyanga ngo-2009 esevele esengumengameli, ngaphandle kokudalula le mali kwa-SARS. ISunday Times yashicilela isiqeshana esisencwadini kaPauw.
I-SSA yakhipha isitatimende yazwakalisa ukuthi ifuna lo mbhali ayihoxise le ncwadi futhi kumiswe nokudayiswa kwayo.